ऊर्जा उपयोगमा ध्यान दिऔं
ऊर्जाको सरल परिभाषा दिनु कठिन छ । ऊर्जा वस्तु होईन । यसलाई हामी देख्न सक्तैनौं, न यसको कुनै छायाँ नैं पर्छ । कुनै विषय वा वस्तुको प्रयोग र अवलोकनमा आधारित क्रमिक अध्ययन ज्ञानलाई विज्ञान भनिन्छ । वि...
तिहारमा विद्युतीय झिलिमिली बत्ती, परम्परालाई जोगाउदै कि मास्दै
झिलिमिली’को चाड भनेर चिनिने तिहार नजिकिएको छ । अबको केही दिनमै तिहारले छपक्क छोप्दै छ । तिहारमा सबैतिर झिलिमिली बत्ती बाल्ने गरिन्छ । परम्परागत दियो, दियालो र मैनबत्तीले घर आँगन सजाउने परम्पर...
विद्युत् खपत अवस्था र भविष्य
हामी कहाँ जलविद्युत विकासको सुरूआत सन् १९११ बाट भएको थियो । त्यस समयमा नेपालको पहिलो तथा एसियाको दोश्रो जलविद्युत आयोजनाका रुपमा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको थियो । तत्...
थलिएको राजनीतिमा रुमलिएको जलविद्युत आयोजना
यति खेर एक भनाई प्रख्यात छ त्यो हो ‘आउदै गरेको तिहारमा पटका अघि पट्केला कि नेकपा फुट्ला ?’ केही दिन देखिको नेकपाभित्रको मुख्य नेताहरूबीच शक्ति संघर्ष सुरु भएको देख्दा साँच्चै...
उत्पादित बिजुली देशभित्रै खपत गर्ने सरकारी योजना अलमलमा
कुनै समय थियो, भारतबाट विद्युत आयात गर्दा समेत देशमा १८ घण्टा सम्म लोडसेडिङ्गको मारमा जनता बस्नु पर्ने बाध्यता थियो । तर यी कुरा आजको दिनमा इतिहास नै बनेको छ । चार वर्ष अ...
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा मैले बुझेको अड्डातन्त्र
नेपाल एउटा प्राकृतिक स्रोतको धनी देश हो । जस मध्ये विश्वमा जलस्रोतको दोस्रो धनी देश पनि हो । जलस्रोतबाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने वा सम्भाव्यता ४३००० मेगावाट रहेको अनुमान गरिन्छ । त्यस अनुरुप चन्द्...
राज्य सम्हाल तिमी, बाँडीचुडी खाउँ सबै मिलि
नेपालीमा एउटा उखान छ “तिमि पिटेको जस्तो गर, म रोएको जस्तो गर्छु ।” हो नेपाली राजनीतिमा पहिले देखि नै यस्ता उखानको उदाहरणीय घटना हेर्न हामीले कुनै इतिहास पल्टाउन पर्दैन । नेपालमा पछिल्लो...
घिसिङको पुनःनियुत्ती तीन करोड जनताको आवज हो
भदौ १२ काठमाडौ, उज्यालो अभियानको गुरु कुलमान घिसिङ यो देशको सच्चा नागरिक र नेपाली हुन जो ब्यक्तिले दिनको १८ घन्टा अन्धकार बाट आफू नियुक्ति भयको केही दिन बाट काठमाडौ उपत्यका बाट उज्यालो अभियान चलायर...
कोरोना भाइसर नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका कस्तो ?
विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइसरका कारण चैत्र ११ गते बाट लकडाउन सुरु भयो । मुखैमा आएको एसईई समेत रोकियो । एकाएक जनजीवन ठप्प भयो । अप्रत्यसित गरिएको लकडाउन पछि हजारौं मानिस सयौं किलोमि...
कृषि क्रान्ति आर्थिक रुपान्तरण र सरकारी अर्कमव्यता
नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषिप्रधान हुन सकिरहेको छैन । कृषिमा आत्म निर्भर बन्न सक्ने अवस्था हँुदा हुँदै वैज्ञनिक कृषि प्रणाली र कृषकहरुलाई संरक्षण र प्रर्वधन गर्न राज्य असमर...
इतिहास नर्विसौं, कुलमान घिसिङ पुनर्उदय हुन आवश्यक छ ।
गोरखा घर भई हाल सितापाईलमा डेरी संचालन गर्दै आएका मनोज सुवेदी भन्छन् “एक जमान थियो दिनमा हजारौ मुल्या पर्ने उत्पादित दुग्ध पदार्थ नष्ट गर्नुपर्दथो, कारण हो दिनमा १८ घण्टा सम्म लोडसेडिङ्ग र इम...
धर्मसंस्कृति पुरातनपन्थी मात्र होईन
तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा १ सय तेईस प्रकारका भाषा बोलिने, विश्वका प्रमुख सभ्यताहरुमध्ये ५ (पाँच) महासभ्यताको फ्युजन भई एउटै सीमारेखा भित्र एकिकृत सभ्यताको रुपमा अगाडि आएको मुलुक नेप...
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा, वैदेशिक लगानी, निजी क्षेत्र र सरकारको उद्देश्य
नेपालको पहिलो जलबिद्युत आयोजना फर्पिङ हो । वि. सं १९६८ मा बेलायतको सहयोगमा नेपालमा विजुलि बल्यो । नेपालमा विद्युत उत्पादनको सुरुवात राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र सम्शेर जंगबहादुर राणाले गरेका थिए । उनल...
कोरोना महामारी पश्चात, देशको ऊर्जा क्षेत्र र रोजगारीको अवसर
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड–१९ का कारण सयौ देशको अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको अवस्था छ । विश्वका विकसित मुलुकहरुको पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्म असर परेको समयमा नेपाल जस्त...
प्राविधिक शिक्षामा गुणस्तरको मापन
बालबालिकाको शिक्षा हासिल गर्न पाउने हकलाई नेपालको वर्तमान संविधानले स्थापित गरेको छ । तर, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा लिन पाउने हक त्यसमा प¥यो कि परेन ? स्पष्ट छैन । सीप र दक्षतासँग जोडिएको...